भाइटिका लगाइदिएर घर फर्किन लागेकी बहिनीलाई दाइले खुकुरी हाने | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १२:४६ लेखक nepali janta
ताप्लेजुङ । जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका ३ का विवस मगरले आफैंलाई भाइटिका लगाइदिएकी बहिनी र दुई भाञ्जीमाथी खुकुरी प्रहार गरेका छन् । दाजुलाई टिका लगाउन धनकुटाबाट आएकी बहिनीलाई मंगलबार बिहान घर फर्कन लाग्दा खुकुरी प्रहार गरेका हुन् ।
बहिनी र भञ्जीहरुलाई खुकुरी प्रहार गरे पश्चात उनले आफ्नै पेटमा खुकुरी छिराएका थिए।
गम्भिर घाइते भएकी बहिनी रेनुका मगर भुजेल, भाञ्जीद्वय ८ वर्षीया कृष्टिना र ६ वर्षीया ओरिना भुजेलको जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नकसेपछि काठमाडौं रेफर गरिएको छ। विवसको पनि उपचार भइरहेको छ। रेनुका, कृष्टिना र ओरिनाको अधिकांस चोट टाउकोमा परेको छ।
गाडी चढ्न हिँड्न लागेका बहिनी र भाञ्जीलाई बिहान ५ बजेको समयमा खुकुरी प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रहरी प्रमुख इनिस्पेक्टर लक्ष्मण थापा मगरले जानकारी दिए।
जिल्ला अस्पतालले रेफर गरेकाले उनिहरुलाई थप उपचारकालागि काठमाण्डौं लािगएको हो। हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं लािगएको थापामगरले बताए। खुकुरी प्रहार गर्नुको कारण खुलेको छैन। सबै घाइते भएको र उपचारमा रहेकाले घाइतेहरुको उपचारपछि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा उपचार गराउँदै घाइतेहरु। उनिहरुलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर थप उपचारकालागि काठमाडौं लािगएको छ।
सुन तस्करी प्रकरण: छानबिन प्रतिवेदन गुमनाम
काठमाडौं । सुन तस्करको ट्रान्जिट बनेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अझै पनि ठूलो परिणाममा तस्करी हुने गरेको खुलेको छ ।…
पूर्वसांसदबाट छनोट भएका योजनालाई रकम वितरण गरे गैरकानुनी र भ्रष्टाचार ठहरिने, अबकाे संसद सञ्चालन खर्च सवा चार अर्ब !
काठमाडौं । संघीय संसदका दुई सदनको सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ७०…
भारतले धौलीगङ्गा बाँध खोलेपछि आतंक
बैतडी । भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत् परियोजनाको बाँध गए रातिदेखि खोलिएको छ । एनएचपिसी लिमिटेड,…
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओलीको सरकार पछिल्लो समयमा विवादको घेरामा तानिँदै गएको छ । पार्टीभित्रै आन्तरिक द्वन्द्व रहेको…
चिकित्सा शिक्षामा फर्जी फ्याकल्टी रोक्न अनिवार्य औंठा छाप, सञ्चालनमै संस्थागत मिलेमतो !
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराइने मेडिकल कलेजमा फर्जी फ्याकल्टी (नक्कली विषयगत शिक्षक) सञ्चालनमा संस्थागत मिलेमतो देखिएपछि कारबाहीको दायरामा…
टेकुमा उपचाररत दुई जनाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ 48 views
ज्वरो आएर भरतपुर अस्पताल भर्ना भएकी युवतीको मृत्यु 37 views
अमेरिकामा एकैदिन ९ सय बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या २ लाख नाघ्यो 34 views
कोरोनाभाइरस: विश्वव्यापी महामारीबाट कुन देशमा कति सङ्क्रमण र मृत्यु 12 views
बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा नै मृत 10 views